Hanavao ny tranokalanao amin'ireto menus cascading CSS 16 ireto | Famoronana an-tserasera
Ny menio cascading na dropdown dia tena ilaina amin'ny ankamaroan'ny karazana tranonkala. Indrindra ireo izay mila fampidiran'ny mpitsidika ny angon-drakitra, toy ny zavatra tsotra toy ny fisafidianana ny lahy sy ny vavy na ny fisafidianana izay loko ho ilay akanjo izay hovidinao amin'ny eCommerce anay.
1 Lisitry ny riandrano
2 Menu dropdown miaraka amin'ny jQuery
3 Lisitry ny riandrano style
4 Lisitry ny riandrano mihetsika
5 Vokatry ny menio dropdown
6 Sarimiaina amin'ny riandrano ao anaty menio
7 Miaraka amin'ny jQuery kely: menio Waterfall
8 Lisitry ny riandrano mahafinaritra
9 Menu dropdown ao amin'ny CSS
10 Menio dropdown
11 Lisitry ny riandrano tsotra
12 Fikarohana menio marindrano
13 Menu dropdown ao amin'ny CSS
14 Rindrina amin'ny riandrano miaraka amin'i JS kely
15 Menu menio cascading CSS madio iray hafa
16 Cascade menu zig zag hevitra
Lisitry ny riandrano
Menu dropdown miaraka amin'ny jQuery
Lisitry ny riandrano style
Lisitry ny riandrano mihetsika
Ity menio dropdown ity dia manandrana mampiseho ny fampiasana ny sarimiaina nihemotra isaky ny singa miseho rehefa mamela ny pointer totozy isaky ny menio. Miaraka amin'ny ampahafolon'ny fanemorana vitsivitsy dia tratra io fihemorana io izay manome azy io tena miavaka.
Vokatry ny menio dropdown
Toy ny a andiana karatra avy amin'ny tokotanin-tsambo, ny sarimiaina ity menio riandrano ity dia tena manokana ho azy. Vokatry ny riandrano tena tsara izay CSS madio. Efa fantatrao izay tokony hataonao hampiharana azy amin'ny tranokalanao.
Sarimiaina amin'ny riandrano ao anaty menio
Miaraka amin'ny jQuery kely: menio Waterfall
Lisitry ny riandrano mahafinaritra
Menu dropdown ao amin'ny CSS
Un menio riandrano minimalist ary namboarina tamin'ny CSS fotsiny izy io. Sarimiaina tsotra, saingy vita tsara mba tsy hisongadina. Menio tsy voamarika ary manaraka ny fenitry ny famolavolana ankehitriny.
Ity menio cascade CSS madio ity dia iray hafa manavaka tsara amin'ny sary mihetsika mitranga izany isaky ny manindry ny menio izahay. Ny sary mihetsika dia manosika ny varavarankely avy amin'ny ilany ankavanana miaraka amin'ny fotoana mety. Iray amin'ireo tena mahaliana amin'ny lisitra iray manontolo.
Lisitry ny riandrano tsotra
Tsotra ny fiavian'ity menio ity ary misy HTML sy CSS. Ity dia iray amin'ireo menus izay mamela antsika hanavao izany singa lehibe ao amin'ny tranonkalantsika izany aza manome cante firy. Heveriko fa takatra tsara ny tiana holazaina amin'izany.
Fikarohana menio marindrano
Na dia efa hihaona aza ny 4 taona, ity menan'ny riandrano ity dia mametaka ilay eo akaikiny amin'ny fomba famoronana mahafinaritra. Raha zavatra hafa no tadiavinao dia iray hafa azonao atao ny mifantina amin'ilay lisitra.
Menio iray hafa madio amin'ny CSS ary maro loko io, farafaharatsiny amin'ny fanaingoana omena ao amin'ny ohatra. Miaraka amin'ny loko fisaka, ny sary mihetsika dia manambara effets shutter mihodina izay mandatsaka ny faritra samihafa amin'ny menio voafantina. Iray amin'ireo menus amin'ny riandrano liana amin'ny lisitra izay manana lohahevitra voafidy tsara.
Rindrina amin'ny riandrano miaraka amin'i JS kely
Menu menio cascading CSS madio iray hafa
Lisitry ny cascading miaraka amina sary mihetsika izay zara aza misy tara ny faha-arivo faharoa. Ka mamokatra ny vokatry ny fahamaimaizana eo amin'ny mpitsidika izany. Vetivety hoverina sy menio dropdown mahaliana tsy misy fananahana be amin'ny sehatra ankapobeny.
Cascade menu zig zag hevitra
Raha mitady menio hafa ankoatry ny lisitra iray manontolo amin'ity lahatsoratra ity ianao, ity menio dropdown ity dia manana ny zavatra rehetra tadiavinao. ny sary mihetsika novokarina dia zigzag hanolotra karazana traikefa iray hafa fanandramana kely. Mety ho tafiditra anaty lohahevitra lalao video izy io, ka raha manana karazana mpanjifa mitady zavatra hafa ianao dia azo antoka fa io no mety indrindra amin'ny lisitra iray manontolo. Ny endriny misavoana sy ny sarimiaina haingam-pandeha dia milaza azy rehetra.
Avelanay ianao ity andiana menus CSS ho an'ny tranonkalanao ity izay manana maro an'isa amin'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » CSS » 16 ny sarin'ny CSS manonitra ny tranokalanao
Ny fifandanjana asymmetrika amin'ity sombin-javatra ity izay manameloka ny voka-dratsin'ny tanan'olona